पुरुषको तुलानामा महिलाले धेरै सुत्नुपर्ने !! तर किन? निद्रा कसरी पूरा गर्ने त ? जान्नुहोस - Experience Best News from Nepal
पुरुषको तुलानामा महिलाले धेरै सुत्नुपर्ने !! तर किन? निद्रा कसरी पूरा गर्ने त ? जान्नुहोस
भनिन्छ नि एक दिनको निद्राले सात दिन पिर्ने गर्छ । निन्द्रा मानिसको जिवनमा आफै लाग्ने कुरा हो । त्यसैले निद्रा लागेको समयमा निद्रा पुग्ने गरि सुत्नु पर्छ । निद्राको कमीले धेरै किसिमका समस्या पैदा गर्ने कुरामा अहिले पनि कसैको दुईमत नहोला ।
मानिसहरु कम्तीमा नि आठ घण्टा सुत्नु पर्ने चिकित्सक बताउँछन । हाम्रो समाजमा पुरुषको तुलनामा महिला कम सुत्ने गरेको हुन्छ । महिलाहरु घरायसी काम धन्दाको कारणले अबेर सुत्ने अनि छिटो उठने गर्छन । यसरी उनीहरुको सुताई पर्याप्त हुँदैन । निद्राको कमीले महिलाहरुको शरीरमा दुष्प्रभाव हुनसक्छ ।
आखिर, किन महिलाहरुलाई पुरुषको तुलनामा बढी निद्राको आवश्यकता पर्छ त ?
– केही विज्ञका अनुसार महिलाहरु मस्तिष्कको प्रयोग धेरै गर्छन्, किनकी उनीहरुलाई एकै समयमा धेरै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्छ । र, दिमागलाई ताजा र चलायमान राख्न पनि उनीहरुलाई पुरुषको तुलनामा धेरै सुत्नु पर्दछ .
–कामको चापका कारण महिलाहरुले भनेको समयमा सुत्न पाउँदैनन् । ढिलो सुत्दा उनीहरुलाई भट्ट निद्रा पर्दैन । त्यसैले, उनीहरुलाई निद्रा पूरा गर्न पनि अत्यधिक समय सुत्नुपर्छ । विशेषगरी, महिलाहरुको जीवनमा यस्ता बदलावहरु आउने गर्छ, जसले गर्दा उनीहरुको निद्रामा असर पुगेर इन्सोमेनिया हुने खतरा उच्च हुन्छ ।
निद्रा कसरी पूरा गर्ने
१) समयमा सुत्ने गर्नाले निद्रा पर्ने बानि पर्छ ,
२) सुत्नु अगाडी तातो दूध पिउने । यसले पनि गहिरो निद्रामा मद्दत गर्छ ।
३) सुत्ने कोठा धेरै उज्यालो नबनाउँने ,
४) उच्च गुणस्तरको तकिया र ओछ्यानको प्रयोग गर्ने ।
५) सुत्नु भन्दा अगाडि कफी नपिउने ,
गोलभेडा सेवन गर्नुका ८ फाइदा र ४ बेफाइदा !! जानुहोस के के ??
राती समयमा निद्रा लाग्दैन !! अब अपनाउनुहोस यी ११ तरिका, के गर्न हुन्छ के हुन्न पढ्नुहोस !!
विवाह अघिको यौन सम्पर्क, के जिवनसाथीले थाहा पाउन सक्लान् ? जानीराखौ
महिनाबारी पछि कुन दिनको यौन सम्पर्क सुरक्षित हुन्छ ? (जानी राखौं)
महिलाले पुरुषमा खोज्ने यी हुन् पाँच कुरा
यस्ता व्यक्तिहरुले भुलेर पनि कागती पानी नपिउनुहोस् !!
कुन दिन महिलाहरुमा अत्याधिक यौन चाहना हुन्छ ? अध्यनले यस्तो भन्छ